Ahoana ny fampidinana Photomath ho an'ny PC maimaim-poana (kinova farany) | Vaovao momba ny gadget
Paco L Gutierrez | 08/02/2021 18:31 | Nohavaozina amin'ny 19/02/2021 18:42 | Android, General, Tutorials
Nanjary malaza ny PhotoMath fitaovana ho an'ny telefaona finday, miaraka aminy no ahafahantsika mamaha ny olana matematika rehetra amin'ny alàlan'ny fakan-tsarin'ny terminal. Ny mpikirakira azy dia nantsoina hoe calculator voalohany miorina amin'ny fakantsary, fa fitaovana tena ilaina tokoa amin'ny fampianarana ao an-trano, satria afaka manampy betsaka an'ireo ray aman-dreny te-hanampy ny zanany hanao ny enti-modiny. Miaraka amin'ity rindranasa ity dia maka sary fampitahàna tsotra fotsiny izahay ary manolotra anay ny valiny, ary koa torolàlana hanatanterahana azy tsikelikely.
fa, Azo ampiasaina amin'ny solosaintsika ve ity rindranasa ity? Eny, na dia izany aza dia mila mampiasa emulator Android isikaTsy olana izany fa mety mahazo aina amin'ny sasany ary somary manahirana ihany. Ilaina indrindra izany ho an'ireo izay tsy te hanana finday eo akaiky eo rehefa mianatra na miasa izy ireo. Tsy isalasalana fa ny mpianatra na ny ray aman-dreny rehetra dia hankasitraka ny fananana ity fitaovana ity amin'ny fitaovana rehetra araka izay tratra. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fampidinana maimaimpoana ny PhotoMath amin'ny solosainao amin'ny endriny farany.
1 1. Misintona Android Emulator ho an'ny PC
2 2. Mametraha emulator Android amin'ny PC na macOS.
3 3. Sintomy ny Photomath
4 Fampiharana Android mahaliana alaina tahaka amin'ny PC
1. Misintona Android Emulator ho an'ny PC
Azo ampiasaina amin'ny Android ity rindranasa ity ka tsy maintsy maka tahaka ny Android amin'ny PC-tsika isika, satria misy programa marobe, saingy hanolotra iray manokana izahay, izany dia ny Bluestacks. Izany dia tsy isalasalana fa ny programa fanahafana Android malaza indrindra, nefa koa ny mahomby indrindra sy miasa. Ankoatry ny fiasa be indrindra, ny fametrahana azy dia manana tombony fa raha manana olana isika dia hanana vahaolana an'arivony amin'ny tsindry tokana amin'ny tranonkala.
Sintomy ny Bluestacks amin'ity rohy ity ho an'ny PC na MAC.
Azonao atao ny mijery ity fanangonana emulator Android ity izay efa nataonay teo amin'ny Internet, amin'ity rohy ity raha sanatria ka manana macOS ianao, na amin'ity hafa ity raha sendra manana PC Windows ianao.
2. Mametraha emulator Android amin'ny PC na macOS.
Ny fametrahana ny emulator Bluestacks dia tena tsotra, mila miditra amin'ny tranokalan'ny ofisialy fotsiny isika ary manomboka ny fisintomanaHo hitantsika izany ao amin'ny fampirimana fampidinana ireo fitaovantsika. Raha vantany vao vita tanteraka ny fisintomana, dia hanatanteraka ny rakitra fametrahana izahay ary hamita azy manaraka ny torolàlana rehetra, mitandrema mba tsy hametaka add-on ho an'ny tranokala na hanaiky karazana dokambarotra ho an'ny mailaka anay.
3. Sintomy ny Photomath
Ny fananana ny emulator napetraka tanteraka amin'ny solosaintsika, mila mandeha fotsiny isika ary tadiavo ny bara fikarohana, ao no hanoratantsika PhotoMath ary hifantina azy. Hisokatra ny fidirana amin'ny magazay fampiharana Google ary haseho amintsika ao amin'ny Bluestacks. Mila tsindrio fotsiny ny bokotra fametrahana tahaka ny amin'ny finday Android rehetra.
Vantany vao vita ny fametrahana dia ho hitantsika ao amin'ny vatasarihana fisoratana anarana napetraka, raha tsy hitantsika izy io dia hidirantsika amin'ny motera fikarohana ataon'ny emulator. Ataovy ao an-tsaina fa ny fampiharana dia novolavolaina ho an'ny telefaona finday ka mety misy lesoka hafa amin'ny fampiasana azy amin'ny emulator solosaina.
Ireo famantarana ireo dia mitombina na ho an'ny solosaina misy rafitra fiasa Windows na ho an'ny solosaina misy rafitra fiasa macOS.
Fampiharana Android mahaliana alaina tahaka amin'ny PC
Betsaka ny rindranasa na lalao mahaliana izay tsy hitantsika ao amin'ny solosaintsika, fa afaka maka tahaka tsy misy olana amin'ny Bluestacks isika, hanome anarana ny sasany mahaliana indrindra isika.
Tonian-dahatsoratry ny sary mahafinaritra izay hahatonga ny sarinay tranainy indrindra ho toa ny ankehitriny indrindra natao tamin'ny fakantsary maoderina indrindra, Izy io dia fampiharana izay manana ny fiasan'ny fanadiovana ny sary manjavozavo na pixelated antsika izay tazomintsika tsy amin'ny mobiles dia tsy toy izao intsony.
Ny vokatra dia mahagaga, Na dia tsy hitovy amin'ny sary tsara indrindra hakantsika ankehitriny aza izy ireo dia hanome endrika ankapobeny ireo sary rehetra tsy tianay ho very ireo. fa tsy mampiseho. Raha manana galeriana lehibe momba ny sary taloha izay efa nitadiavana fomba fanamboarana hatry ny ela izahay dia ity no fotoana ananantsika ary ny tsara indrindra dia maimaimpoana tanteraka ho an'ny Android izany ka mila mametraka azy io fotsiny isika. ireo sary rehetra ireo tsirairay avy ary tahirizo ao anaty fampirimana ireo kopia novaina.
Na dia misy kinova an-tranonkala an'ny WhatsApp miaraka amina asa maro aza dia miankina amin'ny terminal misy antsika foana io ary tsy manana ny fiasa rehetra ankafizintsika amin'ny telefaona misy antsika, miaraka amin'ny kinova Android ho an'ny emulator, hankafizinay ny fampiharana WhatsApp tsy miankina iray manontolo izay ahafahanay mampifandray laharana telefaona sy manao antso an-tsary ary ny asany feno tsy misy olana.
Ity fampiharana malaza ity dia manery amin'ny alàlan'ny forum tiako indrindra, ny fanangonana azy rehetra miaraka amin'ny rafitra fandefasan-kafatra tsy miankina tsy miankina iray hafa, dia iray amin'ireo rindranasa afaka ankafizintsika amin'ny emulator Android. Ho fanampin'ny fanarahana ireo dinika ankafizinay, mamela antsika handefa sary sy hanaitra ihany koa izy io amin'izy rehetra avy hatrany amin'ny alàlan'ny fampandrenesana fanosehana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana ny fampidinana Photomath ho an'ny PC maimaim-poana (kinova farany)